ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ (တရားဝင်အမည်အားဖြင့် ဂမ်ဘီယာ သမ္မတနိုင်ငံ သည် အာဖရိက အနောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အနောက်ဘက်ရှိ အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာနှင့် ထိစပ်နေသော တိုတောင်းသော ကမ်းရိုးတန်းမှ အပ ကျန်နေရာအားလုံးကို ဆီနီဂေါလ်နိုင်ငံ က ဝိုင်းရံထားသည်။ဂမ်ဘီယာသည် အာဖရိကတိုက် ကုန်းမကြီးပေါ်တွင် အသေးဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ဆောင်ပုဒ်: Progress, Peace, Prosperity
နိုင်ငံတော် သီချင်း: For The Gambia Our Homeland
၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၉၆၅
၂၄ ဧပြီလ ၊ ၁၉၇၀
၁၀,၃၈၀ km2² (၄,၀၀၇ sq mi) (အဆင့်: ၁၆၄)
၁,၇၀၅,၀၀၀  (အဆင့် - ၁၄၆)
၁၆၄.၂/km2²(၄၂၅.၅/sq mi) (အဆင့် - ၇၄)
"ဂမ်ဘီယာ" ဟူသော အမည်မှာ မန်ဒင်ကာ ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်း "ကမ်ဘရာ/ကမ်ဘား" ဆိုသော စကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာပြီး ဂမ်ဘီယာမြစ် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ (သို့မဟုတ် ဆီရာလူမျိုးတို့၏ ဂမ်ဘာ ခေါ် သက်ကြီးရွယ်အို သေဆုံးသူများကို ရိုက်ပုတ်ရသော ဂမ်ဘာ ခေါ် ဘူးသီးတစ်မျိုး မှ ဆင်းသက်လာခြင်း လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ စီအိုင်အေ ကမ္ဘာ့အချက်အလက်စာအုပ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အချိန်အပြည့်အစုံ ကမ္ဘာ့မြေပုံ နှင့် ဗြိတိသျှ တို့၏ တရားဝင် အသုံးပြုရန် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများဆိုင်ရာ အမြဲတမ်း ကော်မတီ တို့၏ အဆိုအရ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံ၏ အရှေ့တွင် The ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို ရုံးသုံးအခေါ်အဝေါ်အဖြစ် ထည့်သွင်းသုံးနှုန်းသော နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ (အခြားတစ်နိုင်ငံမှာ ဘဟားမားနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။) အလေ့အထအရ The ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို ရည်ညွှန်းရာတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသော နိုင်ငံ အများအပြား ရှိပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၊ကွန်ဂိုနိုင်ငံ ၊ ဆူဒန်နိုင်ငံ၊ ယီမင်နိုင်ငံ၊ ကိုမိုရိုနိုင်ငံ၊ ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဆေးရှဲနိုင်ငံ၊ မော်လဒိုက်နိုင်ငံ၊ ဆော်လမွန်အိုင်းလန်းနိုင်ငံ၊ ဒိုမီနီကန် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ မာရှယ်အိုင်းလန်းနိုင်ငံ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်ပြီး အတိအကျအနေနှင့်မူ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသည်။  ၁၉၆၅ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် "သည် ဂမ်ဘီယာ" ဟူသော နိုင်ငံအမည်ကို သုံးနှုန်းခဲ့သည်။ ၁၉၇၀တွင် သမ္မတနိုင်ငံ အဖြစ် ကြေငြာပြီးနောက် နိုင်ငံ၏ အမည်အရှည်မှာ "ဂမ်ဘီယာ သမ္မတနိုင်ငံ" ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယာယာ ဂျမ်းမား၏ အစိုးရမှ နိုင်ငံ၏ အမည်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် "ဂမ်ဘီယာ အစ္စလာမ် သမ္မတနိုင်ငံ" ဟု ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်တွင် သမ္မတ အာဒါမာ ဘားရိုးက နိုင်ငံ၏ အမည်ကို "ဂမ်ဘီယာ သမ္မတနိုင်ငံ" ဟု ပြန်လည် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ 
ဂမ်ဘီယာ ကိုလိုနီနယ်မြေ နှင့် အစောင့်အရှောက်ခံနိုင်ငံ (၁၈၂၁-၁၉၆၅)
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း (၁၉၆၅ မှ ယနေ့အထိ)
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသည် ၁၉၆၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် ဓနသဟာယ နိုင်ငံများအတွင်း ဒုတိယမြောက် အဲလိဇဘက် ဘုရင်မ မှ ဂမ်ဘီယာ၏ ဘုရင်မ အဖြစ် ခံယူကာ ဘုရင်ခံချုပ်မှ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် အုပ်ချုပ်သော စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ် ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အနေနှင့် လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့သည်။ မကြာမီ အချိန်တွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ တစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ဂမ်ဘီယာကို သမ္မတနိုင်ငံ တစ်ခု အဖြစ် အဆိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ ထိုဆန္ဒခံယူပွဲမှ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရင် လိုအပ်သော မဲ သုံးပုံ နှစ်ပုံကို မရရှိနိုင်ခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း ရလဒ်ကြောင့် နိုင်ငံတကာတွင် ဂမ်ဘီယာ၏ လျို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးခြင်း၊ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ အများနှင့်ဆိုင်သော အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်မှု ကျင့်သုံးခြင်းတို့ကြောင့် အာရုံစိုက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်ကြားဖြတ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ (AFPRC) မှ ဂျာဝါရာ၏ အစိုးရထံမှ အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ဗိုလ် ယာယား အေ.ဂျေ.ဂျေ. ဂျမ်မား သည် အေအက်ဖ်ပီအာစီ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ဖြစ်လာသည်။ အာဏာသိမ်းချိန်တွင် ဂျမ်မားသည် အသက် ၂၉နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ အေအက်ဖ်ပီအာရ်စီသည် ဒီမိုကရေစီ အရပ်သား အစိုးရသို့ ပြန်လည် ပြောင်းလဲမည့် အစီအစဉ်ကို ကြေငြာခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပရန် လွတ်လပ်သော ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အား ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ကာ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရန် မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂ ရက်တွင် ဂမ်ဘီယာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးမှ ဂမ်ဘီယာသည် ဓနသဟာယနိုင်ငံများ အဖွဲ့မှ ချက်ချင်း နှုတ်ထွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး ၄၈ နှစ်ကြာ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဂမ်ဘီယာ အစိုးရမှ "ဂမ်ဘီယာ အစိုးရသည် မည်သည့် ကိုလိုနီ အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်မျှ ဖြစ်မည် မဟုတ်ဘဲ နောင်တွင်လည်း ကိုလိုနီစနစ်ကို သက်တမ်းရှည်စေသော မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းတွင်မှ ပါဝင်မည် မဟုတ်ကြောင်း။" ကြေငြာခဲ့သည်။ 
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ အဒါမာ ဘာရိုးအား သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသူ အဖြစ် ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၂ နှစ်ကြာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဂျမ်မားသည် အစပိုင်းတွင် ၂၀၁၆ ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် သမ္မတရာထူးမှ စွန့်ခွာမည်ဟု ကြေငြာသော်လည်း နောက်တွင် ရလဒ်သည် တရားမဝင်ကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အသစ်ပြန်လည် ကျင်းပရန် တောင်းဆိုခဲ့သဖြင့် အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေး အဖွဲ့ (ECOWAS) မှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၀တွင် ဂျမ်မားသည် ရာထူးမှ စွန့်ခွာရန် နှင့် နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားရန် သဘောတူခဲ့သည်။ 
ဂမ်ဘီယာသည် အကျယ်ဆုံးနေရာတွင် ၅၀ ကီလိုမီတာ (၃၁ မိုင်) မျှသာ ကျယ်ဝန်းပြီး စုစုပေါင်းဧရိယာမှာ ၁၁,၂၉၅ km2 (၄,၃၆၁ sq mi) မျှ ဖြစ်သည်။ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်၏ ၁,၃၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၅၀၀ စတုရန်းမိုင်) (၁၁.၅%) သည် ရေဖုံးလွှမ်းလျှက် ရှိသည်။ ၎င်းသည် အာဖရိက ကုန်းမကြီးတွင် အသေးငယ်ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည် ဆိုပါက ဂမ်ဘီယာ၏ စုစုပေါင်း ဧရိယာမှာ ဂျမေကာကျွန်းထက် အနည်းငယ်မျှ ပို၍ သေးငယ်သည်။
ဆီနီဂေါနိုင်ငံသည် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံအား သုံးဘက်သုံးတန်မှ ဝန်းရံထားပြီး အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ၏ ကမ်းရိုးတန်းမှာ ၈၀ km (၅၀ mi) မျှ ရှိကာ အနောက်ဖက် အစွန်း ဖြစ်သည်။
မူအားဖြင့် ဆိုရလျှင် ဂျာဝါရာ အုပ်စိုးစဉ်ကာလာအတွင်း နိုင်ငံရေးအရ ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း တကယ့်လက်တွေ့တွင် ပြောကြသည်မှာ "ပါတီတစ်ခုထဲက နိုင်ငံတော်၏ အာဏာကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပြီး ဒေါ်ဒါ ဂျာဝါရာ၏ ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကျော်ကြားမှုကို ဝန်းရံထားသည်။" ဟု ဆိုကြသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာလတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ အကန့်အသတ်ရှိပြီး အတိုက်အခံပါတီများမှာ အားနည်းကာ အဖျက်အမှောင့်လုပ်သူများဟု ကြေငြာခံရနိုင်သည့် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အတိုက်အခံ ပါတီများအနေနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ညီတူညီမျှ ရယူနိုင်စွမ်းမရှိပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စီးပွားရေး သမားများက ၎င်းတို့အား ထောက်ပံ့ရန် ငြင်းဆိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အစိုးရအနေနှင့် အများပြည်သူသို့ ကြေငြာချက်များနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများအတွက် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရှိပြီး မဲမသမာမှုများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မရိုးသားမှုများ ရှိသည်ဟု စွပ်စွဲမှုများ ရှိသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ပီဒီအို အိုင်အက်စ်မှ ဘန်ဂျူးတွင် ရွေးကောက်ပွဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ မသမာမှုများ ရှိသည်ဟု တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မညီဟု ဆိုကာ အမှုကို ပလပ်ခဲ့သည်။ 
ဂမ်ဘီယာသည် ဓနသဟာယနိုင်ငံများအဖွဲ့မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ဂမ်ဘီယာ အစိုးရမှ "ဂမ်ဘီယာ အစိုးရသည် မည်သည့် ကိုလိုနီ အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်မျှ ဖြစ်မည် မဟုတ်ဘဲ နောင်တွင်လည်း ကိုလိုနီစနစ်ကို သက်တမ်းရှည်စေသော မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းတွင်မှ ပါဝင်မည် မဟုတ်ကြောင်း။" ကြေငြာခဲ့သည်။သမ္မတ အသစ် လက်ထက်တွင် ဂမ်ဘီယာသည် ဗြိတိသျှ အစိုးရ၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် ဓနသဟာယ သမ္မတနိုင်ငံ အဖြစ် ပြန်လည် ရောက်ရှိရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၂ တွင် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပက်ထရစ်ရှာ စကော့တလန် ထံသို့ ဓနသဟာယနိုင်ငံများ အဖွဲ့သို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ရန် လျှောက်လွှာကို တရားဝင် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ 
ဂမ်ဘီယာစစ်တပ် (GAF) အား ဂမ်ဘီယာနှင့် ဆီနီဂေါ နှစ်နိုင်ငံအကြား နိုင်ငံရေးပေါင်းစည်းမှု ဖြစ်သည့် ဆီနီဂမ်ဘီယာ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ လိုအပ်ချက်အရ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အစက ဗြိတိသျှတို့ လေ့ကျင့်ပေးထားသော ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံတော်ကြည်းတပ်နှင့် ဆီနီဂေါတို့ လေ့ကျင်ပေးထားသော ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံတော်ရွန်ဒါမရီ (ဂျီအင်န်ဂျီ) တပ်ဖွဲ့ တို့ ပါဝင်သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ဂျီအင်န်ဂျီအား ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် ဂျမားမှ ဂမ်ဘီယာရေတပ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်များ အလယ်ပိုင်းတွင် ဂမ်ဘီယာလေတပ်ကို တည်ထောင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဂျမားသည် နိုင်ငံတော်ရီပတ်ဘလစ်ကင် အစောင့်တပ်ဖွဲ့အား အထူးတပ်ဖွဲ့ယူနစ်များဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံတော်ကြည်းတပ်တွင် အင်အားအကြမ်းမျဉ်း ၉၀၀ ခန့် ရှိပြီး ခြေမြန်တပ်ရင်း ၂ ခုနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ရှိသည်။ဖားရပ်သံချပ်ကာယဉ် နှင့် အမ်၈ ဂရေးဟောင်း သံချပ်ကာကားများကို အသုံးပြုကြသည်။ ရေတပ်တွင် ကင်းလှည့်ရေယာဉ်များ ရှိပြီး ထိုင်ဝမ်မှ ၂၀၁၃ တွင် ရေယာဉ်အသစ်များကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည် ဂျီဒီပီ၏ ၃၀% ရှိပြီး အလုပ်လုပ်သူ၏ ၇၀% ကို အလုပ်ပေးထားသည်။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍတွင် မြေပဲထုတ်လုပ်ရေးသည် ဂျီဒီပီ၏ ၆,၉%မျှ ရှိပြီး အခြားကောက်ပဲသီးနှံများမှာ ၈,၃%၊ ကျွဲနွားတိရိစ္ဆာန် ၅.၃%၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ၁၈% နှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း ၀.၅% တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထုပ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှာ ဂျီဒီပီ၏ ၈% မျှ ရှိပြီး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှာ ၅၈% ရှိသည်။ အနည်းငယ်သာရှိသော ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ပေါ်တွင် အခြေခံသည် ( ဥပမာ- မြေပဲကြိတ်ခွဲခြင်း၊​ကိတ်မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ ဘီယာချက်လုပ်ခြင်း နှင့် သားရေလုပ်ငန်းတို့ ဖြစ်သည်။ အခြားသော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများမှ ဆပ်ပြာ၊ အချိုရည်၊ အဝတ်အထည် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ယခင်က ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့သည် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ အဓိက ပစ္စည်းတင်ပို့ရာ ဈေးကွက် ဖြစ်ခဲ့သည်။​ သို့သော်လည်း လတ်တလော နှစ်များတွင် ဆီနီဂေါ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်​ ဂျပန်တို့သည် ဂမ်ဘီယာ၏ ထင်ရှားသော ကုန်သွယ်ရေး မိတ်ဖက်များ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။​အာဖရိကတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၌ ဆီနီဂေါသည် ဂမ်ဘီယာ၏ အကြီးမားဆုံး ကုန်သွယ်ရေး မိတ်ဖက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ မတိုင်မီကမူ ဂင်းနီဗစ်ဆော နှင့် ဂါနာ နိုင်ငံတို့သည် ဆီနီဂေါနှင့် ညီမျှသော အရေးကြီးသော ကုန်သွယ်ရေး မိတ်ဖက်များ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ တကမ္ဘာလုံးတွင် ဂမ်ဘီယာသို့ အဓိက ပစ္စည်းတင်သွင်းသော နိုင်ငံများမှာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ တို့ ဖြစ်ကြသည်။​ ယူကေ၊ ဂျာမနီ၊ အိုင်ဗရီကို့စ် နှင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့မှလည်း ဂမ်ဘီယာသို့ ပစ္စည်းအမြောက်အများ တင်ပို့ ကြသည်။​ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေး လိုငွေပြမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၃၁ သန်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြို့ပြတွင် နေထိုင်သူမှာ ၅၇.၃% ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ လူဦးရေစာရင်း၏ အကြိုစာရင်း အရ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်လူဦးရေ ကြား ကွာခြားမှုမှာ လျော့နည်းလာပြီး ဒေသအများအပြားကို မြို့ပြ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ကြေငြာခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ မြို့ပြသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ဖွံဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ နှင့် ခေတ်မီလာခြင်းတို့က ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသား အများစုထံသို့ အနောက်တိုင်း၏ အမူအကျင့်များနှင့် တန်ဖိုးများကို ယူဆောင်လာကြသော်လည်း ဒေသရင်းနေ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ အခမ်းအနား ကျင်းပမှုနှင့် ဆွေမျိုးများအကြား ဓလေ့အရ နီးစပ်စွာ ရှိမှုတို့မှာ နေ့စဉ်ဘဝ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း အဖြစ် တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသည် အာဖရိကကုန်းမကြီဂတွင် အသေးဆုံး နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ ယဉ်ကျေးမှုသည် အမျိုးမျိုးကွဲပြားသော ယဉ်ကျေးမှုများမှ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ ရလာဒ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်သည် ဂမ်ဘီယာမြစ်၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ကျဉ်းမြောင်းသော မြောင်းကလေးတစ်ခု အဖြစ် တည်ရှိပြီး ရေထုသည် နိုင်ငံ၏ အသက်သွေးကြောသဖွယ်ဖြစ်ပြီး ဒေသခံများက "မြစ်" ဟူ၍သာ ခေါ်ဆိုကြသည်။ သဘာဝအတားအဆီး မရှိပါက ဂမ်ဘီယာသည် အနောက်အာဖရိကတခွင်တွင် ရှိသော လူမျိုးအများစု၏ နေထိုင်ရာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဝေဖန်သူများက အစိုးရအား လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို ကန့်သတ်သည်ဟု စွပ်စွဲကြသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းလိုက်သော ဥပဒေမှ လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်၍ သတင်းစာဆရာများကို အကျဉ်းချနိုင်သည့် အာဏာရှိသော ကော်မရှင်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အသရေဖျက် ရေးသားမှုအတွက် ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးသော ဥပဒေကို ထပ်မံပြဌာန်းခဲ့ပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုနှင့် ရုပ်သံ လွှင့်ထုတ်မှု လိုင်စင် အားလုံးအား ပယ်ဖျက်ခဲ့ကာ မီဒီယာအဖွဲ့အားလုံးအား ယခင် အခကြေးငွေထက် ၅ ဆမျှ ရှိသော ကြေးဖြင့် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်စေခဲ့သည်။
Population of Cities in Gambia (2019)။
Maclean၊ Ruth။ "Yahya Jammeh leaves the Gambia after 22 years of rule" (in en-GB)၊ The Guardian၊ 21 January 2017။
Gambia's Yayah Jammeh confirms he will step down (20 January 2017)။
Ramsay၊ Stuart။ "Former Gambia leader Yahya Jammeh flies into political exile" (in English)၊ Sky News၊ 22 January 2017။ 23 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Gambia overview။ World Bank။5July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Why Africa's 'smiling coast' is officially referred to as 'The' Gambia။ 12 September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Constitution of the Republic of the Gambia (1996)။ 29 January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
La Gambie s'autoproclame "État islamique" (in French)။ Europe 1 (13 December 2015)။
Adegun၊ Aanu။ "Adama Barrow removes 'Islamic' title from Gambia's name" (in en-US)၊ 29 January 2017။
The Gambia: President Adama Barrow pledges reforms (28 January 2017)။
Easton P (1999) "Education and Koranic Literacy in West Africa" Archived 20 December 2016 at the Wayback Machine.. IK Notes on Indigenous Knowledge and Practices, n° 11, World Bank Group. pp. 1–4
Yevstratyev, O (2018). "Chronological Dating of the Duchy of Courland's Colonial Policy". Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 3: 34–72.
Park, Mungo Travels in the Interior of Africa v. II, Chapter XXII – War and Slavery Archived 24 September 2009 at the Wayback Machine..
Webb, Patrick (1994). "Guests of the Crown: Convicts and Liberated Slaves on Mc Carthy Island, the Gambia". The Geographical Journal 160 (2): 136–142. doi:10.2307/3060072.
"UK regrets The Gambia's withdrawal from Commonwealth"၊ BBC News၊3October 2013။4October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Gambie : l'opposition désigne Adama Barrow comme candidat unique pour affronter Yahya Jammeh en décembre Archived 29 November 2016 at the Wayback Machine.. Senenews.com (31 October 2016). Retrieved on 18 December 2016.
Gambia: Will Mama Kandeh's Nomination Papers Be Accepted? – Freedom Newspaper Archived 30 November 2016 at the Wayback Machine.. Freedomnewspaper.com (6 November 2016). Retrieved on 18 December 2016.
"Gambia: Prison sentences for opposition leaders continues downward spiral for human rights"၊ Amnesty International၊ 20 July 2016။
Gambia's Jammeh loses to Adama Barrow in shock election result Archived 29 June 2018 at the Wayback Machine.. BBC News (2 December 2016). Retrieved on 18 December 2016.
Gambia leader Yahya Jammeh rejects election result Archived 16 June 2018 at the Wayback Machine.. BBC News (10 December 2016). Retrieved on 18 December 2016.
"The Gambia: UK 'very pleased' about Commonwealth return"၊ BBC။
"The Gambia presents formal application to re-join the Commonwealth" (Media Release)၊ The Commonwealth၊ 23 January 2018။ 24 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Boris Johnson is only delighted the Gambia wants back into the British Commonwealth Archived 15 February 2017 at the Wayback Machine.. thejournal.ie (15 February 2017)
(http://www.hydrant.co.uk)၊ Site designed and built by Hydrant။ The Gambia rejoins the Commonwealth - The Commonwealth။
Staff၊ Our Foreign (8 February 2018)။ Gambia rejoins the Commonwealth after democratic election။
The Gambia။ The World Factbook။ Central Intelligence Agency။
Wright၊ Donald (2004)။ The World andaVery Small Place in Africa: A History of Globalization in Niumi, The Gambia။ Armonk, New York: M.E. Sharpe။ pp. 149–150။ ISBN 978-0-7656-1007-2။
Hayward၊ Derek; J. S. Oguntoyinbo (1987)။ Climatology of West Africa။ Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield။ p. 189။ ISBN 978-0-389-20721-4။
"In Gambia, New Coup Follows Old Pattern"၊ The New York Times၊ 28 August 1994။
Democratic Transition in the Gambia: The Burden of Leadership and Consolidation (2017)။
Gambia: Political opinion (March 2017)။
The Gambia: Country Focus (December 2017)။
"Background note: The Gambia" . U.S. Department of State (October 2008).
Beijing Resumes Formal Ties With Gambia, in Signal to Taipei။ Wall Street Journal။ 19 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
correspondent၊ Owen Bowcott Legal affairs (11 November 2019)။ Gambia files Rohingya genocide case against Myanmar at UN court။7April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
UK regrets The Gambia's withdrawal from Commonwealth။ BBC News။
WHO | Female genital mutilation and other harmful practices။ Who.int (6 May 2011)။
"The Gambia passes bill imposing life sentences for some homosexual acts" (in en-GB)၊ The Guardian၊ 2014-09-08။
Gambia must account for missing journalist Ebrima Manneh။ Committee to Protect Journalists (14 April 2009)။
Ebrima Manneh။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာရေး အဖွဲ့။ 17 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Gambia: Missing editor died in detention in 2008 after mistreatment | Reporters without borders (in en) (2019-03-22)။
Ceesay၊ Fabakary B. (2019-03-19)။ Journalist Manneh Died On Road To Diabugu Hospital (in en-US)။
Chapter XXVI: Disarmament – No.9Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons။ United Nations Treaty Collection (7 July 2017)။
Law, Gwillim (19 April 2006)။ Divisions of Gambia။ Administrative Divisions of Countries ("Statoids")။ 29 September 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Prime Bank (Gambia) is the 12th commercial bank in the Gambia။ Observer.gm (27 May 2009)။ 19 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Human Development Report 2010" (2010-12-31). Human Development Report. doi:10.18356/e5a0500a-en. ISSN 2412-3129.
TOTAL FERTILITY RATE။ CIA World Factbook။
National Population Commission Secretariat (April 30, 2005)။ 2013 Population and Housing Census: Spatial Distribution။ The Republic of The Gambia။
Admini။ Islamic Online University Signs Agreement with FBC (in en-gb)။
Human Development Report 2009 – Gambia။ Hdrstats.undp.org။5November 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
WHO | Female genital mutilation and other harmful practices။ Who.int (6 May 2011)။7October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The State of the World's Midwifery 2014။ United Nations Population Fund။ 2014။ ISBN 978-0-89714-026-3။
The Gambia: Demographic and Health Survey, 2013။ Gambia Bureau of Statistics။ 25 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
CHAPTER IV – PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS။ Constitution of the Republic of The Gambia (1997)။ 14 January 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Gambia, The။ International Religious Freedom Report 2007။ Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (14 September 2007)။ 14 January 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Sait, Siraj and Lim, Hilary (2011) Land, Law and Islam Archived 13 August 2016 at the Wayback Machine.. Zed Books. p. 42. ISBN 1842778137.
Shia Presence in Gambia။ Wow.gm။7October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Diouf, Niokhobaye (1972). "Chronique du royaume du Sine, suivie de Notes sur les traditions orales et les sources écrites concernant le royaume du Sine par Charles Becker et Victor Martin (1972)". Bulletin de l'IFAN 34B (4): 706–7, 713–14.
Breach of Faith။ Human Rights Watch။ ဇွန် 2005။ p. 8။ 14 မတ် 2017 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ 20 ဇွန် 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Gambia - Government and society (in en)။
Roots revival: how does the new Kunta Kinte compare to the classic? (in en) (2017-02-08)။
FolkWorld #71: Africa။
Traditional food and drink in The Gambia (in en-gb)။
"Country profile: The Gambia"၊ BBC News website။ 16 October 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"President tightens media laws in The Gambia"၊ 11 May 2005။ 16 October 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Banjul newspaper reporter freed on bail pending trial"၊ နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့၊ 13 June 2006။ 16 October 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 May 2006။
"Gambia – Annual report 2005"၊ နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့၊ December 2004။ 16 October 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 April 2017။
The Gambia | Countries | Collection of Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum။
Sport – Gambia! Archived 23 April 2016 at the Wayback Machine., weebly.com, accessed3April 2016.